Hlataw.com – Page 76 – Entertainment Website
ပှငျ့ခပျြလှာလေး နှဈဖကျ တီလေးယားနေ ပီ မ ခြော မပွညျ့ဝသော သူမ တရှိုက် မက်မက်
လယ်ပိုင်ရှင် ကြီး ဦးတင် ရဲ့ အလုပ်သမား။ အသက် ၁၈ ပြည့်ပြီ။မိဘ ဆွေမျိုးမရှိ သော တ ကောင်ကြွက်။ ရွယ်တူကောင် မ လေးတွေက သူ့ ကို စိတ်မဝင် စား။သူကလည်း…
သူကတော့ အသက် ၃၅လောက်ရှိပါပြီ၊ တရုတ်မဆိုတဲ့အတိုင်း အသားကတော့ဖွေးနေတာပဲ၊ နဲနဲဝတယ် ရုပ်ကလဲ အလန်းကြီးမဟုတ်ပါဘူး၊ နို့ကြီးတယ်၊ ဖင်ကောက်တယ်၊ ကျနော် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်စလျှောက်တော့ သူနဲ့တွေ့တာပဲ၊ သူကကျနော်တို့ ဌာနရဲ့ အကြီးအကဲပေါ့၊ ကျနော်က သူ့လက်ထောက်ပေါ့၊ ကျနော်က အလုပ်တခုလုပ်ပီဆိုလျှင်…
ကျွန်တော့် နာမည်က… ငပဲ။လိင်တန်ဆာ ဆိုရင်လဲမမှားဘူးပေါ့။ဒါပေမယ့် လီးလို့လဲ ခေါ်ကြပြန်တယ်။ နောက်ထပ်လဲ အခေါ်အဝေါ် လေးငါးဆယ်မကရှိပါသေးတယ်။ခင်ဗျားတို့ ကြိုက်သလို လွတ်လပ်စွာ တင်စားပြီး ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော် စိတ်မဆိုးဘူး။ကျွန်တော်က တော်တော် စရိုက်ကျတဲ့ကောင်ဗျ။ နဲနဲလဲ ကြွစောင်းစောင်းနိုင်တယ်။ဒါမို့ ငပဲဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့…
ဟယ်.င့ါပန်းပင်လေးတွေကုန်ပါပြီ မေမေ မေမေ.လာပါအုန်း.ဒီမှာ `ဇာလေး´ ပန်းပင်လေးတွေ ကုန်ပြီ´´ အိမ်ရှေ့ပေါ်တီအောက်မှ စီကနဲထွက်ပေါ်လာသော အသံစူးစူးလေးကြောင့် ပန်းပင်တွေကြား ငုတ်တုတ်ထိုင်၍ နှင်းဆီအိုးတွေအောက်တွင် အုတ်ခဲတွေခုနေသော မြင့်ကျော်တစ်ယောက် လှမ်း၍ကြည့်မိလိုက်သည်။ပြီးတော့ သူ့မျက်နှာက တဖြေးဖြေးပြုံးဖြီးဖြီးကြီးဖြစ်လာသည်။ “တော်တော်လှတာပဲဟင်း´´ အသက်(၁၈)နှစ်အရွယ် ဖြူဖြူဖွေးဖွေး…
အားးး..သားး.. သားးး…. ဘာဖွဈတာလဲ ဟင် သား ဘာဖြစ်လို့လည်းးးး.. ဘွားလေး အိပ်မက်တွေ မက်ပြီး ထအော်ပြန်ပြီလား သား ပြန်အိပ်လိုက်အုံးနော် မနက်အလုပ်သွားရအုံးမယ် မဟုတ်လား သား ဟုတ်ကဲ့ ဘွားလေး သား ရေသောက်ပြီး ပြန်အိပ်လိုက်ပါ့မယ်…
“နွယ်….. ဒီနေ့ ည အတွင်းခံတွေ မဝတ်ခဲ့နဲ့နော် မောင်ဒီတိုင်းလေးမြင်ခြင်လို့” “ဟာ…. မောင်ကလဲကွာ နွယ်ဒီတိုင်းကြီးမနေရဲပါဘူး” “လုပ်ပါကွာ မောင့်မိန်းမက ဘယ်လောက်လှလဲဆိုတာ လူတွေကြည့်ရအောင်” “မောင် အရမ်းမကဲနဲ့ကွာ ဟိုဘက်ဝိုင်းကလူတွေက နွယ့်ကိုကြည့်နေကြပြီး” “ကြည့်ပစေပေါ့ကွာ မောင့်မိန်းမကို လှလို့ကြည့်တာပဲဟာ”…
ဘသော် တစ်ယောက် အလုပ်ပြုတ်လာလို့ အိမ်ပြန်ရင်း စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ လမ်းလျှောက်လာခဲ့ရာက လမ်းထိပ်ရောက်မှပင် စိတ်နဲ့ကိုယ် ပြန်ပေါင်းစည်းမိတော့သည်။မနေ့က အလုပ်လုပ်ရင်း အလုပ်ထဲက ကောင်မလေးကို ရိသဲ့သဲ့ သွားပြောမိရာက မန်နေဂျာနဲ့ ပြန်တိုင်လို့ ရှင်းပြရာကနေ မန်နေဂျာ နဲ့ပါ ထပ်စကားများကာ…
အဲ့ ဇာတ်လမ်းမှာမိမိလိုးချင်တဲ့မမများအန်တီများအားရည်ရွယ် စိတ်ကူးယဉ်ရေးသားထားဖြင်းဖြစ်သည် ဇာတ်ကောင်များမှာတကယ်ရှိသောကြောင့်အမည်လွဲထားပါတယ် … ကျွန်တော်နာမည်ဟာ မောင်မောင်ဖြစ်ပြီးအသက်၂၇ရုံးဝန်ထမ်းပါ။ ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက်မှာများသောအားဖြင့် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်စည်စည်းလုံးလုံးရှိ တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်သိနေကြပါတယ်…. ကျွန်တော်ဧ၊်လီးမှာ ၅လက်မခွဲအရွယ်အစားသာဖြစ်ပြီး ငယ်ကတည်းကအပျိုကြီးများကိုစွဲလမ်းတတ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်…အောကားကြည့်ရင်လည်း..ဂျပန်မင်းသမီး တို့ကိုသာကြည့်ပြီးမှန်းထနေကြဖြစ်တယ် ..တစ်နေ့ကျွန်တော်ရုံးကပြန်လာချိန်ဘုရားပွဲတွေ့၍မြန်မာမုန့်ဝင်ခဲ့ပြီး ကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့မလှမ်းမကမ်းရှိ အန်တီ အိတို့ဆီဝင်လည်ခဲ့ပါသည်။ အန်တီအိသည်ေ၇ွှကြည်အလွန်ကြိုက်တတ်သူတစ်ဦးဖြစ်သည် အသက်၄၉နှစ်ရှိပြီးမုဆိုးမတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ခန္ဒာကိုယ်မှာ…